DEPIOTE : « Tsy laharam-pahamehana ny fanoloana an’i Jean Max Rakotomamonjy »
Maresaka ny eny anivon’ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza, ny hanoloana an-dRakotomamonjy Jean Max, izay filohan’ity andrim-panjakana ity. Efa nisy ny fanangonan-tsonia ho amin’izay fanalàna azy eo amin’ny toerany izay ary fantatra fa mbola nitohy hatramin’ny faran’ny herinandro lasa teo izany, hoy ny loharanom-baovao voaray. 20 novembre 2017
Araka izany dia tsy mitsaha-mitombo ny isan’ireo solombavambahoaka marisika ho amin’ny fanoloana ny filohan’ny antenimieram-pirenena ho olom-baovao indray. Manoloana izany indrindra dia nitondra ny fanehoan-keviny ny filohan’ny vondrona parlemantera Vpmmm, ny solombavambahoaka Andriasy Philobert. Nambarany tamin’izany fa tsy tokony hataon’ireo depiote laharam-pahamehana ny fanoloana ny birao maharitra eo anivon’ny antenimieram-pirenena indrindra fa amin’izao fotoana fohy tsy ahatongavan’ny fifidianana izao.
Tokony hiandry ny fifidianana ny rehetra, hoy izy ka amin’izay vao hisolo avokoa ireo mpikambana ao anatin’ny birao ary eo no afaka manarina ny lesoka rehetra izay solombavambahoaka voafidy. « Tsy laharam-pahamehana izany fanovàna izany ary efa antomotra rahateo ihany koa ny fotoam-pamaranana ny fotoam-piasan’ireo solombavambahoaka dia atao angamba fa na tsy hisy fanovàna aza dia tsy maintsy hiroso amin’ny fifidianana ka hisy fiovana tanteraka ho an’ny rehetra izay ary ny tsirairay izay manam-paniriana mbola hirotsaka ho depiote dia eo indray izy no manarina sy mijery ny fomba hanarenana ny sisa », hoy ny fanampim-panazavana noentiny.
Nambarany kosa anefa fa tsy azo tampenam-bava amin’ny filazana ny fomba fitantanana sy ny fomba fiasa tsy mety ao anatin’ity andrim-panjakana ity ireo solombavambahoaka ireo. Ankoatr’izay nambarany fa hatramin’izao dia mbola milamina sy mizotra tsara ny fandehan-draharaha rehetra eny Tsimbazaza eny. « Hatreto aloha dia heveriko fa mbola mandeha amin’ny antsakany sy andavany ny zavatra rehetra ao anatin’ity antenimieram-pirenena ity », hoy hatrany ny fanazavana noentiny.
Mahakasika ity vaovao eny anivon’ny antenimieram-pirenena ity hatrany dia loharanom- baovao iray no nilaza fa fijeren’ireo solombavambahoaka ny tombotsoany manokana no mivangaina ao anatin’ity fiketriketrehana ny fanalàna ny filohan’ny antenimieram-pirenena eo amin’ny toerany ity. Voalaza fa misy amin’ireo depiote tsy nahazo fiara tsy mataho-dalana no tsy faly amin’ny birao maharitra mijoro amin’izao fotoana izao ka izay no anisany mibahan-toerana ao anatin’io fanoloana an’i Jean Max Rakotomamonjy io.